Horudhac: Liverpool vs Everton… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa Merseyside derby ee ka dhacaya Anfield) – Gool FM
(Liverpool) 04 Dis 2019. Kulankii 285-aad ee Merseyside derby ayaa caawa waxa uu garoonka Anfield ku dhexmari doonaa kooxda hoggaanka u haysta horyaalka Premier League ee Liverpool iyo naadiga ay dariska yihiin ee Everton.
Kaliya hal mayl ayay isu jiraan labada kooxood Juquraafi ahaan, laakiin marka la eego miiska kala sarreynta aad ayay u kala fog yihiin iyadoo Liverpool ay 26-dhibcood ka sarreyso kooxda ay xafiiltamaan oo leh 14-dhibcood kaliya 14-dhibcood oo la ciyaaray illaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Kooxda Liverpool ayaa ganaax ku weynaysa goolhayaheeda koowaad ee Alisson kaddib markii kaarka cas loo taagay kulankii ugu dambeeyey, sidaas darteed waxaa shabaqa markale ugu soo bilaaban doona Adrian.
Joel Matip ayaa wali la sii dhibtoonaya dhaawac jilibka ah waana uu maqnaanayaa, iyadoo ay wehlinayaan Fabinho iyo Nathaniel Clyne.
Weeraryahanka Everton ee Theo Walcott ayaa dib uga soo laabanaya xanuun uu ku seegay kulankii ugu dambeeyey oo ay Axaddii guuldarro kala kulmeen Leicester City.
Seamus Coleman ayaa shaki la galinayaa kulankan sababo la xiriira dhaawac feeraha ah, halka Fabian Delph aysan u badnayn inuu taam ahaado ciyaartan.
>- Liverpool ayaan guuldarro la’aan ah (unbeaten) 17-keedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay la ciyaartay Everton (7 Guul iyo 10 Barbaro) waana rikoorkoodii ugu dheeraa abid ee aysan ka badin koox ka soo horjeedda tartankan.
>- Everton ayaan guuleysan kulan horyaalka ah iyadoo garoonka Anfield kula ciyaareysa Liverpool tan iyo bishii September sanadkii 1999-kii, Toffees ayaana sagaal kulan barbaro gashay isla markaan 10 kulan laga soo adkaaday kulamadii ay booqatay illaa iyo waqtigaas.
>- Tartammada oo dhan Liverpool ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) 19 kulan oo ay Everton la ciyaartay (9 Guul iyo 10 Barbaro) waa guuldarro la’aantii ugu dheerayd ee ay ka helaan deriskooda kulanka Merseyside.
>- Everton ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliso todobo ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay booqatay Liverpool, hal gool ayayna dhaliyeen mid kasta oo ka mid ah afarta kulan ee kale.
>- Kooxda Liverpool ayaa guuldarro la’aan ah 31-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka Premier League (26 Guul iyo 5 Barbaro) haddii ay guuldarro ka fogaadaan kulankan waxa ay noqon doontaa guuldarro la’aantoodii ugu dheereyd abid oo aan la garaacin kulamada sare ee horyaalka Taariikhda.
>- Macallinka Kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa guuleystay 99 ka mid ah 158 kulan horyaalka Premier League guul uu gaaro kulankan ayaana ka dhigi doonta isaga macallinkii labaad ee sida ugu dhaqsiyaha badan ku gaara 100 guul tartankan, kaddib Jose Mourinho oo 142 kulan ku gaaray 100 guul, waxaana uu sidoo kale noqon doontaa macallinkii ugu dhaqsiyaha badnaa Liverpool ee 100 guulo ah gaara kulammada sare ee horyaalka Taariikhda.
>- Everton ayaa guuldarreysatay siddeed ka mid ah 14-keedii kulan ee ugu horreeyey horyaalka xilli ciyaareedka markii ugu horreysay tan iyo kal ciyaareedkii 2011-12 markaasoo uu kooxda waday David Moyes, kaliya hal xilli ciyaareed taariikhdooda oo dhan ayaa laga badiyay wax ka badan 14 kulan – 10 jeer waana xilli ciyaareedkii 1948-49.